Goretti Irisarri र जोस गिल रोमेरो। ला traductora को लेखकहरु संग साक्षात्कार | वर्तमान साहित्य
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | 11/09/2021 12:00 | अद्यावधिक गरियो 12/09/2021 09:18 | साक्षात्कार, लेखकहरू, किताबहरु
लेखकको ट्विटर प्रोफाइल।
Goretti Irisarri र जोस गिल रोमेरो उनीहरु बीस बर्ष भन्दा बढि को लागी एक रचनात्मक जोडी भएको छ र त्रयी जस्तै शीर्षक प्रकाशित गरीएको छ सबै मृत (बनेको शूटिंग ताराहरु पतन, रहस्य को तंत्र र संलग्न शहर), उदाहरणका लागि। अनुवादक यो उनको पछिल्लो उपन्यास हो र यो भर्खरै यो महिना बाहिर आयो। म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु तपाइँको समय र दया मलाई समर्पित गर्न को लागी यो दुई हात साक्षात्कार र देखाउँदै कि उनीहरु पक्कै राम्रो गर्छन्।
Goretti Irisarri र जोस गिल रोमेरो - साक्षात्कार
साहित्य वर्तमान: अनुवादक तपाइँको नयाँ उपन्यास हो। तपाइँ हामीलाई यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ र विचार कहाँ बाट आयो?
जोस गिल रोमेरो: उपन्यास संग कथाहरु आठ मिनेट ढिलाइमा के हुन सक्छ जुन संग फ्रान्को रेल उहाँ पुग्नुभयो हिटलर संग भेट Hendaye मा। त्यो वास्तविक घटना बाट हामी एक को विकास प्रेम कहानी र रहस्य, एक अनुवादक अभिनीत, एक महिला जो साहसी छैन, जो चाहदैन तर शान्ति मा बस्न चाहन्छ, र जो जासूसी को एक साजिश मा संलग्न छ।
गोरेट्टी इरिसरी: हामी षड्यन्त्र को एक धेरै जीवित नायक राख्ने विचार बाट मोहित भएको थियो त्यो छिटो ट्रेन मा, यो एकदम एक सिनेमाई छवि हो र हामी तुरुन्तै को बारे मा सोचे हिचक, ती फिल्महरु मा तपाइँ देख्न थाल्नुहुन्छ र उनीहरु तपाइँलाई जान दिदैनन्।
AL: के तपाइँ त्यो पहिलो किताबमा पढ्न सक्नुहुन्छ? र तपाईले लेखेको पहिलो कथा?
GI: मेरो मामला मा म Tolkien संग शुरू, होबिट, वा कमसेकम यो पहिलो किताब हो मलाई याद छ। यो एक औषधि को खोज जस्तै थियो र म कहिल्यै रोकिएन।
JGR: शायद पढ्नुहोस् को केहि किताब पाँच, जुन मेरी बहिनी शेल्फ मा हुनेछ। तर निस्सन्देह के मेरो बाल्यकाल को चिन्ह लगाईयो, र म भन्न चाहन्छु कि मेरो जीवन थियो, थियो होम, कार्लोस Giménez द्वारा जब हामी जानकारी छ र लेख्नुहोस् ... पक्कै ती हास्यहरु मध्ये एक को स्क्रिप्ट जुन मैले एक किशोरी को रूप मा आकर्षित गरें, जो राक्षसहरु संग डरावनी कथाहरु थिए, भारी द्वारा प्रभावित परदेशी जेम्स क्यामरून द्वारा र डेभिड Cronenberg फिल्महरु को विशेष प्रभावहरु द्वारा।
AL: एक प्रमुख लेखक? तपाइँ एक भन्दा धेरै र सबै युगहरु बाट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
JGR: गोर म भन्दा धेरै पढिएको छ (हाँस्छन्)। तर त्यहाँ धेरै छन् ... गार्सिया मार्केस र Galdós, Horacio Quiroga र Stefan Zweig, पेरेज रिभर्टे र एडुआर्डो mendoza, बुकोवस्की...
GI: म केटीहरु को लागी एक भाला तोड्ने छु। म एस बाट केहि को लागी आगो मा मेरो हात राख्छुei Shonagon, भर्जिनिया वुल्फ, मार्गुराइट Yourcenar, सुसान Sontag वा सबैभन्दा प्रसिद्ध सर्फर, अगाथा क्रिस्टी...
GI: गम्भीरतापूर्वक, अगाथा एक थियो सर्फ अग्रगामीत्यहाँ बोर्ड को साथमा लहरहरु लाई पकड्न को लागी केहि साँच्चै राम्रो तस्वीरहरु छन्।
JGR: मँ भेट्न मन पराउँथे विदेशी तपाईँ के खोज्दै हुनुहुन्छ गुर्ब.
GI: कस्तो राम्रो प्रश्न! खैर म माया गर्थे मा सिर्जना गर्नुहोस् धेरै अस्पष्ट को शासन अर्को मोड। र जान्न को लागी ... कप्तान नेमो, र त्यो उहाँले मलाई भिगो मुहान को तल्लो को एक सानो भ्रमण को लागी, जो स्पष्ट रूप मा त्यहाँ थियो।
जीआई: छविहरु को लागी खोज टाइप गर्नु अघि। एक नयाँ दृश्य को लागी म छविहरु हेर्न को लागी आवश्यक छ मलाई सन्दर्भमा राख्नुहोस्, हास्यास्पद पोशाक विचारहरु, केहि विशेष अनुहार।
JGR: पढ्न को लागी, केहि दिमागमा आउँदैन अब ... र हेर्नुहोस्, म एक पागल हुँ! ओ हो, हेर: म सामान्यतया दोस्रो हात को एक धेरै किन्न, ठिक छ, मँ कसैलाई किताबमा रेखांकित गर्न को लागी सहन सक्दिन। मेरा आँखाहरु ती अनुच्छेदहरु मा जान्छन् कि अर्को रोचक भेटियो र यसले मलाई विचलित गर्दछ, यो मलाई विचलित गर्दछ। मैले भने, एक पागल (हाँस्छ)।
AL: र त्यो मनपर्ने ठाउँ र समय यो गर्न को लागी?
JGR: पढ्न को लागी, कुनै संदेह छैन सुत्नु अघिमा ओछ्यान.
GI: म पढ्न को लागी एक मुड़ स्वाद छ जहाँ धेरै आवाज छ, मेट्रो जस्तै। मलाई एकाग्रता मन पर्छ यसले मलाई बाध्य तुल्याउँछ, म आफैलाई धेरै धेरै डुबाउँछु।
AL: त्यहाँ अन्य विधाहरु छन् कि तपाइँलाई मनपर्छ?
GI: मँ वास्तव मा के भनिन्छ मनपर्छ literatura विधाको, दुबै पठन र लेखन को लागी। लेख्न को लागी यो महान छ कि त्यहाँ छ नियमहरु छन् कि तपाइँ लक, सीमाहरु जस्तै कि एक शैली परिभाषित गर्नेहरु को रूप मा। रचनात्मक यो धेरै राम्रो काम गर्दछ। त्यहाँ लार्स वोन Trier द्वारा एक वृत्तचित्र छ, पाँच शर्तहरु, जुन यो धेरै राम्रो तरिकाले व्याख्या गर्दछ: भोन Trier पाँच शूट गर्न को लागी एक छोटो फिल्म को लेखक लाई चुनौती दिन्छ remakes यसको छोटो को, र प्रत्येक पटक यो एक कठिन, अधिक असम्भव स्थिति राखीनेछ। तर साँच्चै डरलाग्दो कुरा यो हो जब लार्स भोन Trier उसलाई भन्छन् कि यस पटक उनी यसमा कुनै शर्त राख्दैनन्: उनी गरीब लेखकलाई एक खाडल अघि असुरक्षित छोड्छन्, त्यो पूर्ण स्वतन्त्रताको।
JGR: धेरै र विविध विधाहरु, तर ... हो, अर्को शौक: म मुश्किलले साहित्य पढ्छु कि स्पेनी छैन। यसले मलाई यो सोच्न नराम्रो बनाउँछ कि मैले पढिरहेको अनुवाद सही हुनेछैन र यो मेरो पढाइ बिगार्ने छ। यो एक धेरै न्यूरोटिक सोचाई हो, मलाई थाहा छ, र म बाट रमाईलो को लागी एक विशेषता को लागी धेरै रमाईलो थियो अनुवादक, जुन केहि भन्छ "म अनुवाद को गुणस्तर मा विश्वास गर्दिन कि मँ पाउने छु।"
AL: तपाइँ अब के पढ्दै हुनुहुन्छ? र लेख्ने?
GI: म पढ्दै छु म्याड्रिड को भावनात्मक मार्ग, को क्यारेरे, La Felguera द्वारा पुनः प्रकाशित। Emilio Carrere, को लेखक सात हन्चब्याक्स टावर, उहाँ एक धेरै अजीब चरित्र, एक विघटनकारी र बोहेमियन कवि हुनुहुन्थ्यो, जसले युद्ध पछि फ्रान्को शासनलाई अंगालेका थिए। उहाँ ती साक्षरता मध्ये एक हुनुहुन्छ जसको विचारधारा लेबल गर्न सजिलो छैन। मा अनुवादक उनी रेडियोमा एउटा कविता सुनाएर बाहिर आउँछन्, जहाँ उनी प्रसिद्ध थिए। कविता पेरिस प्रवेश नाजीहरु को लागी एक प्रशंसा हो, स्वस्तिक अन्तर्गत पेरिस.
हामी त्यो समय को हटबेड देखाउन मा धेरै चासो राख्थ्यौं, जब सबै कुरा अब जस्तो स्पष्ट थिएन र त्यहाँ बुद्धिजीवीहरु थिए जो नाजीवाद को प्रशंसा गरे। उदाहरण को लागी, जर्मन पुस्तक मा Cculrculo de Bellas Artes मा एक ठूलो प्रदर्शनी थियो, जो उपन्यास मा पनि देखिन्छ। जे होस्, त्यहाँ सर्कल को पर्खालहरु मा झुण्डिएको ठूलो स्वस्तिक संग ती तस्वीरहरु छन् ... कहानी यो के हो।
JGR: म पढ्दै छु एक हजार अनुहार भएको नायकक्याम्पबेल द्वारा। मलाई साँच्चै रिहर्सल मन पर्छ। म कथा र यस्तै को तंत्र को बारे मा धेरै पढ्छु, यो हेर्न को लागी कि म एक सानो (हँसी) सिक्न
हामी के लेख्दैछौं भन्ने बारे मा, हामी भर्खर एउटा उपन्यास समाप्त र हामी धेरै सन्तुष्ट छौं। आशा छ कि हामी छिट्टै यसको प्रकाशन को बारे मा खबर दिन सक्छौं।
JGR: ठिक छ, म पहिले भन्दा राम्रो भन्न चाहन्छु र म पहिले भन्दा खराब भन्न चाहन्छु। मेरो मतलब यो एक धेरै, धेरै प्रकाशित छ, तर कठोर परिस्थितिहरुमा: शोषण समय धेरै छोटो छ र प्रतिस्पर्धा भयंकर छ। त्यहाँ धेरै राम्रा मानिसहरु महान पुस्तकहरु लेख्न र पाठक शायद नै समय र उनीहरुलाई छनौट गर्ने क्षमता छ। धेरैजसो अपराधीहरु बाटोमा गायब हुन्छन् वा यो पनि गर्दैनन्। र यो नाटकीय छ कि कति प्रतिभाशाली मानिसहरु त्यहाँ बाहिर छन्, बर्बाद को बारे मा सोच्नुहोस्।
GI: मलाई पनि लाग्छ अडियोभिजुअल फिक्शन को लागी नयाँ दृष्टिकोण भारी, विशेष गरी टेलिभिजन श्रृंखला वजन हुन्छ, जो अधिक साहित्यिक बनेका छन् र क्यारेक्टर को विकास वा कथा को अन्वेषण को धेरै ख्याल राख्छन्। र तिनीहरू एक हुन् कडा प्रतिस्पर्धा, किनकि समय तपाइँ एक श्रृंखला को अध्याय र अध्यायहरु देखेर बिताउनुहुन्छ तपाइँ पढ्न खर्च गर्नुहुन्न।
JGR: यो कठिन समय हो। त्यहाँ धेरै मानिसहरु पीडित छन् वा पीडित छन्। Pहाम्रो तर्फ बाट, हामी मात्र एक निश्चित राहत ल्याउन सक्छौं, त्यो पीडा बाट एक सानो तरीका। ती मध्ये केहि को बारे मा कुरा गरीन्छ अनुवादक पनि: बाट मुक्ति को तरीका हो कि किताबहरु मानिसहरु को लागी मानिन्छ र, त्यो अर्थमा, उपन्यास साहित्य को लागी एक श्रद्धांजलि हो। आशा छ, थोरै समय को लागी पनि, हाम्रा पाठकहरु टाढा जान्छन् हामीलाई धन्यवाद। त्यो प्यारो हुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साक्षात्कार » Goretti Irisarri र जोस गिल रोमेरो। ला traductora को लेखकहरु संग साक्षात्कार